မိုဘိုင်းပရောဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး....... — MYSTERY ZILLION
June 2009 edited July 2009 in Project
လေးစားရပါသောအမ်ဇက်မှအစ်ကိုအစ်မများခင်များ ချစ်ညီတေဇ အကြံပြုပါရစေ။ မိုဘိုင်းမြန်မာလေး ကိုပရောဂျက်တစ်ခုအနေနဲ့ရေးပေးစေလိုပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကုဒ်လေးနဲ့အားလုံးအသုံးပြုလို့ရအောင်ပါ။ source code တွေကိုရေးပေးစေလိုပါတယ်။ဒီပရောက်ဂျက်လေးသာအောင်မြင်ရင်မိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခေတ်ပြောင်းသွားမယ်လို့ညီလေးထင်ပါတယ်။အခုကသူများတွေဘဲအားကြနေရလို့ပါ .....အခုဆိုနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖုန်းတွေကိုသူတို့ဘာသာတွေနဲ့အသုံးပြုနေကြပါပြီ.....အားကြစရာပါ...အမ်ဇက်မှာရှိတဲ့ တတ်ကျွမ်းတဲ့အစ်ကိုအစ်မတွေ အားလုံးကို ဒီပရောဂျက်ကိုအကောင်ထည်ဖေါ်စေလိုပါတယ်.......
ညီလေးကိုအမှားပါရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးပါ ခက်ခဲမှန်းသိပေမယ့် အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုးစားရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်......
မှာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.. ကိုသာသာ လုပ်ထားတဲ့ Ornagai Mobile Dictionary ရှိပါတယ်..
အစ်ကိုမောင်ဖုန်းအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူပါ ။မိုးဘိုင်မြန်မာလေးကိုလည်းအထူးသဘောကျပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင်ပါတယ်။ဖရီးဗားရှင်းဖြစ်ပြီးအားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြူလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ထပ်လောင်းလေးစားမိပါတယ်။ ညီလေးဆိုလိုချင်တာက မြန်မာsms လို့ မက်ဆေ့တွင်မကဘဲ မိုးဘိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလိုသုံးလို့ရအောင်ပါ။ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ် လိုလည်းရမယ် မိုဘိုင်းထဲကနေ web တွေဖွင့်တဲ့အခါ မြန်မာဖိုရမ်တွေကိုကြည့်ရှုလိုရအောင် language ပေါ့ ဗျာ ဥပမာတရုတ် .ယိုးဒယား . ဂျပန်အဲဒီလိုမျိုုး ကိုယ်ပိုင် os လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ပါ........
သူတို့ သုံးထားက ကိုယ်ပိုင် OS မဟုတ်ပါဘူး.. language pack ပါ... အခုအချိန်ထိ Nokia မှာ font ထည့်ဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက် ဇော်ဂျီဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ unicode 5.1 ဖြစ်ဖြစ် သုံးဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး.. iPhone , iTouch မှာတော့ font ထည့်လို့ရပေမယ့် keyboard ရေးဖို့ SDK မထုတ်ပေးတဲ့အတွက် ကြည့်လို့ပဲရမှာဖြစ်ပြီး သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး... sms ပို့တဲ့ software တွေကလည်း image တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ စာတွေလို့ပဲ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်.. မြန်မာ font တစ်ခုလုံး ထည့်သွင်းဖို့ရာ အခုအချိန်မှာ သိပ်အဆင်မပြေသေးပါ...
ကိုစေတန်အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်လည်း ညီလေးကို မသိတာများရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။
ဗမာစာကို Nokia ပေါ်မှာသုံးဖို့က
Nokia မှာ Language pack ထွက်လာမှ အကောင်းဆုံးသုံးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Nokia language pack list ထဲမှာ "MY:Burmese" ဆိုပြီး table space ရှိပါတယ်။
Implementation တော့မရှိသေးပါ။ (Link ကိုပြန်ရှာမတွေ့တော့လို့ နောက်မှ ပြန်ထည့်ပေးမယ်။)
ဖုန်းပေါ်မှာ မြန်မာလို ပေါ်ဖို့ (အနိမ့်ဆုံး အားဖြင့် SMS ရိုက်ဖို့)
အတွက် Key Map လိုပါတယ်။ တစ်ခြား language တွေရဲ့ Phone key map ကဘယ်လိုရှိတယ်မသိ၊
မြန်မာ character တစ်ခုခြင်းဆီကို T9 မှာ တင်ရင် တော်တော် complex ဖြစ်ပြီး သုံးရခက်တဲ့ပြင်၊
စာတစ်ကြောင်းထွက်ဖို့ တော်တော် ရိုက်ရမှာပါပဲ။
နောက်ပြီး Font ပြသနာကလည်း ရှိသေးတယ်။ လူသုံးများတဲ့ font နဲ့။ Fully standard Complaint font
Nokia အနေနဲ့တော့ Market ကြီးရင် အားစိုက်လုပ်မှာပဲ။ မြန်မာ အများစုက ဘိုလို သုံးတာ ပြသနာမရှိတဲ့ပြင်၊
မြန်ပြည်ရဲ့ Market Size က (ကျွန်တော့်အထင် လက်ရှိမှာ) သေးတော့ သိပ်အလေးမထားတာလည်း ဖြစ်မှာပါ။
လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ပေါ့နော်.... :P
Burglish နဲ့ရိုက် မြန်မာလိုပေါ်တဲ့ Application လေးတစ်ခုရေးပြီး ထွက်လာတဲ့ Burglish words (in english character)
တွေကို copy လုပ် SMS ထဲမှာ Paste လုပ်။ ပြီးရင် SMS ပို့။ လက်ခံတဲ့ လူကလည်း SMS ထဲကစာကို Copy လုပ်
ပြီး ခုနက Application ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင် ဗမာလို မြင်ရမှာပေါ့။
နည်းနည်းတော့ လက်ပေါက်ကတ်တာပေါ့။ အကယ်၍ Nokia ရဲ့ SMS system မှာ API ပါရင် Burglish Application နဲ့
ကြည့်ရန်ဆိုတဲ့ Menu လည်း တစ်ခုထည့်ပေးပြီး Application နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ရင် Copy, Paste ဒုက္ခကင်းသွားတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် Nokia က language pack ကို ကောင်းကောင်း support လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ Application လည်း
မြောင်းထဲရောက်သွားမယ်ထင်တယ်။ Burglish ရိုက်ချင်သေးတဲ့ လူတွေတော့ သုံးကြဦးမလားပဲ။
စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင်တော့သုံးကြည့်ကြပါ၊ မြန်မာလိုတော့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံဘူး ။ မပြည့်စုံဘူးဆိုတာ
တော်တော်လေးကို မပြည့်စုံတာပါ ။ သူ့ရဲ့ official site ကိုမေ့သွားလို့ jar file ကိုပဲတင်ပေးလိုက်တာပါ ။
ကိုသာသာ. ကျွန်တော့်အထင်တော့ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လွယ်ပါ့မလား.. ဘားဂလိပ်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရိုက်တာ standard မှ မရှိတာ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီရိုက်နေကြတာဆိုတော့ လိုက်ပြီးပြန်ပေးဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလားဗျ.. ဥပမာဗျာ.. နဲု့ဆိုရင် တစ်ချို့က nae'. , ne'. , ne' ဆိုပြီး ရိုက်နေကြတာလေ.. ဒါတွေအကုန်လုံးကို လိုက်ပြီး ဘာသာပြန်ဖို့ဆို မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်ဗျ... ကျွန်တော့်အထင်လေး ပြောတာပါ.. အစ်ကိုတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်ရင်တော့ လုပ်ပေါ့နော်..ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ရှယ်ပေးပေါ့.. :D
ကိုကိုဝင်း ရေ ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တာလေးကို အကြံပေးကြည့်တာပါဗျာ။
Burglish ကိုလည်း မရေးတတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ burglish ရဲ့ အသုံးချမှုနဲ့ standard ကို